Tsy misy lany andro izany eo! | NewsMada
Tsy misy lany andro izany eo!
Par Taratra sur 12/09/2019
Efa nabosesika sy nibosesika ao an-tsain’ny Malagasy ny hoe « lany andro » na ny « nilaozan’ny toetrandro », sns. Amin-javatra hafa, toy ny teknolojia sy ny hairaha isan-karazany, mety ho marina izany fa raha ny fahendrena kosa, azo lavina marindrano ny maha lany andro ny teo aloha… Kanefa amin’ireo mihitsy no ezahin’ny sasany handemena ny sain’ny Malagasy. Manampy trotraka ihany koa ny tsy fahalalana, ny fihinanana amam-bolony, ny fanaovana rebik’ondry, ny fanaovana omby hantsika, sns. Lany andro ve ny fahendrena malagasy, manaja ny zokiolona? Toraka izany koa ny fanajana ny aina? Ny tain’omby mivadika tsy misy maka? Ny tahotra an’Andriamanitra? Ny firaisankina sy ny fifanampiana?
Fahendrena malagasy, tsy novidiany na nohafarany avy any ivelany ireo fa nomen-Janahary azy. Ankoatra ilay fiheverana fa lany andro na nilaozan’ny toetrandro ny fahendrena malagasy, nosoloin’ny sasany fahendrena hafa izy ireny, hany ka ireo lazaina fa hendry fahiny, nanjary adala ankehitriny. « Ny fanahy no maha olona », hoy ny Malagasy. Efa nilaozan’ny toetrandro, hono, izany fa « ny vola no maha rangahy ». Nanjary voavidin’ny vola avokoa ny vatana sy ny fanahin-dRamalagasy.
Mahavariana anefa fa any amin-dry zareo milaza fa « efa lany andro ny anareo », tsy mba mety ilaozan’ny toetrandro ny fahendrena sy ny soatoavina navelan’ny razany. Vao mainka aza, tazoniny sy tandrovany toy ny anakandriamaso, haparitany maneran-tany avy eo. Raha manandrana hamotika ny avy any ivelany, miala maina satria efa tsara fototra ny an-dry zareo. Raha mba hain’ny ankamaroan’ny Malagasy io paikady io, tsy hitana ny rambony tahaka izao i Madagasikara.
Nanjavona eo imason’ny Malagasy ny fahendreny. Noharatsiana sy novingavingaina izay mba kely fantatra. Tsy maintsy ny Malagasy ihany anefa no afaka mamerina sy manarina azy ireny amin’ny laoniny sy amin’ny hasina nananany… Raha sanatria ka tsy vitan’ny Malagasy tsirairay ny hanao izany, ho lasan’ny vahiny manontolo i Madagasikara! « Tsy ho ela fa afaka 50 taona », hoy ilay mpandalina tantara iray izay.
Fakafaka: aman-jato taona, mitady ny very ihany 21/01/2020
Mety hivadika rivodoza ilay andro ratsy: faritra dimy nahazo filazana loza mitatao 21/01/2020
DHL sy ny minisiteran’ny Fanabeazana : hitohy ho an’ny dimy taona ho avy ny « Go Teach » 21/01/2020
Ho an’ny minisitera foibe ihany: « Panier garni » no tokony ho nozaraina ny mpiasa 21/01/2020
Fampitiavana kolontsaina: ilaina ny hetsika totoafo… 21/01/2020